Sein Lyan - စိ န် လျှံ: လေလှိုင်းပေါ်က ဘလော့ဂါ ဖိုးစိန် အင်တာဗြူး
Writer Sein Lyan Time 10:55 pm
မပြန်ခင် တစ် လာယူပါတယ်ဗျိုးးးးးးးးးးးးး ဟိဟိ
နှစ်လဲ ယူရင် အပြစ်ပြောမလား။
ဟိဟိ အနောက်က နောက်လိုက်တွေ အတွက် နေရာချန်လိုက်ပါဦးမယ်ဗျိုးးးးးးးးးးး
ကဲ။ ညီမတော် အိန်ဂျယ် စာဖတ်နေပြီနော်။
လူကြီးမင်းများ ရှုးတိုးတိုးးးးးးးး ရှုးမပေါက်ရ။ အဲလေ... ရှုးတိုးတိုး အိန်ဂျယ်စာဖတ်နေပြီ။ ဟိဟိ
စကားမစပ်... ငါးတောင်ရောက်လာပြီပဲ။ အဟက်
အားရပါးရ ရယ်ရလို့ ကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာ။
မပြန်ခင်လေး တစ် ရ သွားလို့လဲ ကျေးဇူးတင်တယ်လေ။ အဟိ...
မထင်မှတ်ပဲ တစ်ရလာလို့ ပျော်နေတယ်နော်။
အကိုလေးဖိုးစိန် ကော်မန့်ဆိုတာ ကောင်းစရာပဲရေးရလားဗျ.သိဘူးလေ.ဆိုးအောင်ရေးဦးမယ်.“ခင်ဗျားအင်တာဗျူးကို ဆက်ပါဦး ခုလို ခဏလေး ဘယ်ကောင်းမလဲ.ဒါပဲ”
အူတက်မတက်ကို ရယ်ရတာ ..
ကျနော်က မောနင်းဒျူတီဆိုပြီး ခု နံနက်၎နာရီထိ အိပ်မရလို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒေါသတွေ ထွက်နေတုန်း .. ကိုဂျီးစိန်ဆီရောက်တာ ပိုဆိုးသွားတယ် .. ရယ်လိုက်ရတာ သောက်သောက်လဲ .. ဟားဟားဟား ..
အရမ်းကြိုက်တယ်ဗျိုးးးး ... =D
့HELLO PHOE SEIN ?
I CAN REFRESH THE DAY WITH YOUR POST.
REALLY NICE AND IT'S GOOD IDEA !
အိမ်ကျယ်တို့ ပို့စ်မှာလည်း တစ် ကော့မန့်မှာလည်း တစ်သွားပါလား .. :D
ကိုသီဟသစ်ပို့လို့ရောက်လာတာ... ဒီရောက်တော့အင်တာဗျူးနဲ့တိုးနေတယ်... အူလှိုက်သည်းလှိုက် ရယ်သွားပါတယ်အကိုရေ...
“ကောင်းတယ်ဗျ ဆက်ချွဲ အဲ ဆက်ဆွဲ”
အိုင်ဒီယာ မိုက်တယ် သယ်ရင်း
ကဖိုးစိန်..နဲ့ ဗူးမဲ့သူတွေ ..အဲလေ.ဗျူးမဲ့သူတွေ တိုကင်ဝေထားပါ
17 November 2009 at 04:13
ဟဲလို ကိုဖိုးစိန်လားဗျာ.... ဟာမဟုတ်ပါဘူးလူပါဗျ.... မှားကုန်ပါပြီ.... ဟီးဟီး ကျွန်တော် ကိုဖိုးစိန် ဘလော့ကိုရောက်ပါတယ်.... ဒါပေမယ့် စာတွေလည်းအကုန်ဖတ်သွားတယ်နော်.... ဒါပြဲ ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်လိုက်ဦး ကိုဖိုးစိန်....ဒါပြဲ ဒါပြဲ....
စိတ်မကောင်းအောင်လဲ လုပ်တတ်၊ ပြုံးအောင်လဲ လုပ်တတ်၊ တတ်လဲ တတ်နိုင်တဲ့ ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ ဖိုးစိန်၊ မျောက်ငိုလေး...
“မျက်ရည်ရော၊ နှာရည်ရော ဘယ်လိုထွက်အောင် ငိုတတ်သလဲ ဗျူးချင်ပါတယ်။ ဗဒယို နဲ့ တကွ တင်ဆက်ပီး ဖြေပါ။”
အဲလေ.. ဘလောက်ဂါ ပါဆို၊ စာရေးတာလေးလဲ ဗျူးအုံးမှ။
“စာရေးတဲ့အခါ မျက်ရည်ရော၊ နှာရည်ရော ဘယ်လိုထွက် ထွက်ပီး ရေးတတ်သလား၊ ပြုံးပြုံးကြီး ရေးတတ်သလား ဗျူးချင်ပါတယ်။”
အင်.. ဟုတ်သေးပါဘူး။ ရေးဖူးတဲ့ စာတွေ ဗျူးချင်ပါတယ်ဆိုမှ တစ်ခုမှ မမှတ်မိတော့ဘူး။ တော်ဘီဗျာ။ အဲတာပဲ ဗျူးတော့မယ်။ ဗျူးတာပဲဖြေ ၊ ရှာမရှည်နဲ့။
အစဉ်ချစ် အရှင်ချစ် သဲသဲလှုပ်ချစ် ငြိမ်တည်ပြီးချစ် ထိန်ထိန်ညီးချစ် စိန်စီပြီးချစ်ပါတဲ့...
(ကိုလူထွေး စကား ငှားသုံးတာ၊ ;-P)
ကိုဖိုးစိန်ရဲ့ လေလှိုင်းပေါ်က အင်တာဗျူးက တကယ် ရယ်ရတယ်တော့းD
တော်လိုက်တဲ့ ဖိုးစိန်.... ကဲကဲ သားလေးရေ လုပ်လိုက်ဦးဟ... ဘုရားဖူးတွေ လာနေပြီ။
အလုပ်လုပ်နေရင်းနဲ့ စိတ်ရူပ်လို့ ဘလော့ခ်လေး လာ ဖတ်လိုက်တာ ပြုံးရုံမကဘူး ၀ါးလုံးကွဲရယ်သွားတယ် ဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟဟ
:) ကိုဖိုးစိန်ရေ..မျက်စိထဲကို မြင်ယောင်ပြီး ရယ်မောစွာဖတ်သွားပါတယ်။ :)) ညပိုင်းအစီအစဉ်မျှော်နေတယ်နော့
ရယ်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စလုံးလာရင် သတ်ပစ်မယ်။=(
ကိုယ့်ကိုယ်ကို စာလုံးပေါင်းတွေ မှားမှန်းသိသားပဲ
ရီရလွန်းလို့ ကွမ်း မစားနိုင်ဘူးး
နှစ် ကို စောငိ့ဖတ်နေတယ်။
ခေါင်းစဉ်နဲ့ကော်မန့်တွေဖတ်ပြီး ရယ်စရာပိုစ့်ဆိုတာ သိသွားတယ်...
ငါတောင်မခေါ်လိုက်ရပဲ ၃ မိနစ်ပြည့်သွားတယ်..
တီ............တီ.တီ..... ညီလေးနဲ့ ဗျူးခြင်လို့စောင့် နေတာကြာပြီ ဟုတ်ကဲ့ကျနော် ဖိုးစိန်ပါ ခင်ဗျာ ...ဂွပ် ဟင် သုံးမိနစ် ပြည့် သွားပြီလား
ကောင်းတယ်ညီရေ ဘလော့ ဆိုတာဒါမျိုး ကိုခေါ်တာလို့ပညာတွေထုပ်သုံးလိုက်တာလား အတွေးခ်ါဆန်းသစ်မှုတခုနဲ့တင်ဆက်လိုက်တာပေါ့တခါလာလဲ စိတ်ညစ်တဲ့ အကြောင်း တခါလာလဲခေါင်းကိုက်တဲ့ အကြောင်း တခါလာလဲအဆင်မပြေတဲ့ အကြောင်း အဲဒါတွေကြီးဘဲဖတ်ရတော့စိတ်ညစ် ခေါင်းကိုက် အဆင်မပြေတဲ့ရောဂါတွေ စာဖတ်သူတွေကို ကူးစက်သွား တော့ တာပေါ့ခုလိုတင်ဆက်မှုတွေကိုကြိုဆိုတယ်ဗျာ သိတဲ့ အတိုင်း ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေ တပွေ့တပိုက်ကြီးရလိုက်တယ် အပျော်တွေကူးစက်သွားတယ် ညီ ချစ်တဲ့ ကိုကြီး သုဒြေ္န
ယနေ့ နာမည်ကျော် ပြည်သူ့အချစ်တော် ဖြစ်တဲ့
ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင် ၊ မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့
ဖိုးစိန်နဲ့သူဧ။်ချစ်စရာချစ်သူများ အိမ်သာဘူးကဏ္ဏ ..
အဲလေ..အင်တာဗျူး ကဏ္ဏအစီအစဉ် ထုတ်လွင့်မှု
အပိုင်းတစ် ထုတ်လွင့်မှု အစီအစဉ်မှာ အချိန်အကန့်အသတ်အရ မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ်၊ ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင်နဲ့ စကားမပြော၊ ဖုန်းမဆက်လိုက်ရတဲ့ မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ် ၊ ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့ မောင် ရဲ့ ချစ်စရာပရိတ်သတ် များအနေနဲ့ အပိုင်းနှစ် အစီအစဉ်မှာ လာရောက် ဘူးနိုင်ပါတယ်..အဲ...ဗျူးနိုင်ပါတယ်ရှင်...
မောင်ချစ်တဲ့ ချစ်ချစ်ရဲ့ ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင်နဲ့ အင်တာဗျူး အစီအစဉ် သုံးမိနစ် စကားပြောခန်းကို
ပါဝင်နိုင်ပါကြောင်း ပြောကြားရင် ယနေ့ထုတ်လွင့်မှု အစီအစဉ်ကို ဒီတွင်ပြီးဆုံးပါပြီရှင်....
ဟားဟားဟား....အမလေး ရယ်ရတယ်..အိုင်ဒီယာကလဲ ကောင်းပါ့...ချစ်ချစ်ချစ်တဲ့မောင်လို့ မပြောရဘူး..တကယ်ပဲ..တကယ်ပဲ....း)း)
ဟဟဟဟားးး.. ရီရတယ် ကိုဖိုးစိန်.. ညီက အရှည်ဆုံးပဲ (စာ).. ဟိ.. ဖတ်ကောင်း၏
ပြောစရာကျန်ခဲ့လို့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဆက်တာပါ...
ညီမက ခေါင်းစဉ်နဲ့ ကော့မန့်တင်မကပါဘူး အလယ်က စာပါ ဖတ်ပါတယ်နော်...............
ဖိုးစိန် အင်တာဗြူးကိုတွေ့တော့ လာမယ်လာမယ်နဲ့ အပျင်းထူနေတာ..း)
ခုတော့ ကျမသိသွားပြီ ပေါ်ပြူလာ ဘလောက်ဂါဖိုးစိန်
အစ်ကို ဖိုးစိန် ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်ပုံလေးတွေ ဗိုက်နှိပ်ပြီး ဟားဟား ရယ်ပြီး သဘောကျပြီး ပြီးအောင်ဖတ်သွားပါပြီ အစ်ကိုရေ
ရန်ကုန်သား ...... :))
ဖိုးစိန်လေးရဲ့ လေလှိုင်းပေါ်က အင်တာဗြူးလေးကို လာ ဖတ်သွားပါတယ်။ အတော်လေး ဗြူးထားကြတာမို့ ထပ် မဗြူးတော့ဘူးနော် ။
အောင်မယ်လေး ပါးတောင် ညောင်းသွားတယ်.
ကဖိုးစိန်ဆိုတဲ့ နာမည်လေး စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ..။
သက်မွန်မြင့်နဲ့ ဘာလို့ အဆင်မပြေတော့တာလဲ အလယ်.။အခု ကြားနေတဲ့ ဟောလိဝုဒ်က မင်းသမီးနဲကိစ္စ ဘာညာ အဆုံး..။